धन कमाउने आशा बोकेर जापान पुगेका बाग्लुङका खत्रीको जापानमै मृत्यु ! – Sandesh Press
धन कमाउने आशा बोकेर जापान पुगेका बाग्लुङका खत्रीको जापानमै मृत्यु !
January 13, 2021 151
जापान । धन कमाउने आशा बोकेर परदेश पसेका बाग्लुङका एक पुरुषको जापानमा मृत्यु भएको छ । बाग्लुङको गल्कोट नगरपालिका वडा नं ४ खरुवाका ३८ वर्षीय पूणर् खत्रीको जापानमा कार्यरत रहँदा रहँदै मृत्यु भएको हो ।
३ वर्ष अगाडी जापानको सिजुओका प्रिफेक्चर फुजी सिटीमा कुक पेशामा काम गर्दै आएका उनको ब्रेन हेमरेजका कारण निधन भएको बताईएको छ । उनको जापान स्थित फुजी नोउकेन हस्पिटलमा उपचारको क्रममा शुक्रवार बेलुकी मृत्यु भएको त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरुले बताएका छन् ।
मृतक खत्रीका नेपालमा ३ छोरी र १ छोरा रहेका छन् । निकटतम पारिवारिक श्रोतका अनुसार उनको पारिवारिक आर्थिक अवस्था निकै कमजोर रहेको छ । उनको अन्तिम सस्कार जापानमै गरिने भएको छ । गल्कोट स्थायी घर भई हाल जापानमा रहेका गल्कोटेहरुले उनको अन्तिम संस्कार आईतबार दिउँसो साढे १ बजे जापानमै गर्न लागिएको जनाएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : गुल्मीका एक दम्पत्ती : बेलायतमा श्रीमतीको मृत्यु भएको ४ दिनमा श्रीमानको पनि मृत्यु ,गुल्मी स्थाई घर भई हाल बेलायतमा बसोबास गर्दै आएका एक दम्पतीको निधन भएको छ ।
Prevबर्दिया बा’घ का’न्ड बारे बन्यो पहिलो फिल्म
Next२० महिनाकी बालिकाले ५ जनालाई नयाँ जीवन दिएर संसार छोडिन
चितवनमा बिहे भैसकेकी छोरी फिर्ता लगेका भनिएका माइती र गाउँलेबीच भयो यस्तो, अनिशाको बुबा आमाले खोले वास्तविकता
शनिबार भुलेर पनि नखानुहोस् यी खानेकुरा, नत्र लाग्छ शनिको दशा